Ny rehetra momba ny Fallout fialofana, ny lalao amin'ny fitantanana fialofana nokleary | Androidsis
Betesda rehefa natomboka tamin'ny volana aogositra lasa teo Fallout fialofana ho an'ny Android, dia toa te hampiroborobo ny Fallout 4 efa akaiky izay ho avy any aoriana ho an'ny PC sy consoles. Tsy nanantena izahay fa tapaka amin'ny farany fa hivoaka amin'ny lalao video ho an'ny fitaovana finday araka ny fantatsika taty aoriana. Bethesda dia miloka be amin'ity sehatra ity ary manana studio lalao video aza mikendry ny hamorona lalao video vaovao ary hanavao ny iray amin'ireo lalao tsara indrindra ananantsika ankehitriny amin'ny Android, toy ny simulator ny fitantanana fialofana nokleary.
Fallout fialofana nohavaozina vao haingana miaraka amin'ny fanavaozana lehibe izay misy lafin-javatra roa tena lehibe: rafitra ady sy iraka vaovao. Ireo fiasa vaovao roa ireo dia manolotra safidy vaovao ho an'ny mpilalao ary hamela anao hifehezana amin'ny tanana ny mponina rehefa mandeha amin'ireo iraka ireo izy ireo. Noho io antony io indrindra dia tsy misy fialantsiny tsara kokoa noho ny manararaotra mandinika izay rehetra atolotry ny Fallout Shelter, lalao video izay hananantsika bebe kokoa raha toa ka toy izany no antenain'i Bethesda hanavao azy io tsindraindray.
1 Fototra fialokalofana Fallout
2 Famokarana, biby fiompy ary tranga hafa
3 Ny iraka sy ny rafitra ady
Fototra fialokalofana Fallout
Fallout Shelter dia mametraka antsika alohan'ny fitantanana fialofana nokleary iray manontolo izay ahatongavan'ireo sisa tavela amin'ny famonoana olona ary tsy maintsy omentsika fialofana izy ireo mba hahafahan'izy ireo mivoatra sy ho ampahany lehibe amin'ireo fotodrafitrasa hamorona antsika.
Mba hampandeha tsara ny zava-drehetra dia mila mampindrana isika fiheverana ny enti-manana. Ilaina ny rano sy ny angovo ary ny sakafo mba ho velona ireo mponina ary hanatsara ny fahasambarana ao amin'ny fialofana. Zava-dehibe ny fiantohana fa tsy misy ny tsy fahampian'ny rano, satria izany dia hitarika fahazoan'ny taratra taratra taratra, izay hahatonga azy ireo ho malemy kokoa amin'ny fanafihana. Tokony hifantoka amin'ny statistikan'ny mponina tsirairay ihany koa isika, satria izy ireo dia hanondro izay tokony hampiasantsika azy ireo hanatsarana ny fahombiazan'ny fotodrafitrasa. Rehefa manendry mponina amin'ny toerana iray izahay, dia ho hitantsika fa manome isa azy ireo ianao. Arakaraka ny maha ambony io isa io no mahasoa kokoa ny fametrahana azy amin'ny toerantsika.
Mamorona kojakoja isan-karazany izahay ary mila mampiasa sasany ny mponina handeha hizaha ny tany efitra. Eto no hiadivan'izy ireo amin'ny fahavalo sy izay hahazoany ny fandrobana. Fitaovam-piadiana, fitafiana ary karazan-javatra rehetra azo ampiasaina amin'ny fanamboarana. Raha ny lojika, raha mampiasa olona ambony isika, dia handroso bebe kokoa amin'ny fikarohana azy ireo, ary tsy tokony hitandrina azy ireo matetika koa isika, satria ireo ambany dia tsy haharitra.
Hipetraka ny mpitsangatsangana rehefa mizaha ny Wasteland sy miasa amin'ny toerana, toy ny trano fisakafoanana na laboratoara. Arakaraka ny haavon'ny haavony no ahatongavan'ny fahasalamana bebe kokoa ary azo fantarina izy ireo arakaraky ny haavon'ny fahita any aminy: mahazatra, tsy fahita ary angano. Manana ny boaty fisakafoanana isika, izay azontsika atao amin'ny alàlan'ny zava-bita, izay misy ireo mponina tsy fahita sy malaza.
Famokarana, biby fiompy ary tranga hafa
Ny fanamboarana fitaovam-piadiana sy fitafiana dia ahafahantsika mampiasa ireo zavatra hitan'ny mponina avadiho izy ireo hanosihosy ary mamorona izay tadiavinay. Ity sombin-kazo ity dia ho mahazatra, tsy fahita ary angano, ary hitarika amin'ny fomba hafahafa ilay entana. Mila ny fomba fahandro koa isika mba hahafahana mamorona ireo zavatra hita ao amin'ireo mpandroba maty, any an-tany efitra ary ao amin'ny ozin-fitaovam-piadiana. Arakaraka ny haavon'ny atrikasa no ahazoana fitaovam-piadiana sy fitafiana tsara kokoa.
Rehefa mihabe ny lisitra dia tsy maintsy manatsara ny fitahirizam-baravarana isika satria mety ho kely loatra. Toy ny ambiny amin'ireo fotodrafitrasa azonao atao ny manatsara azy ireo hatramin'ny indroa, noho izany mahaliana fa manana toerana malalaka ianao hanohizanao manao fitaovam-piadiana sy akanjo.
Ankoatry ny fanaovana asa-tanana, dia tafiditra ao anatin'ny iray amin'ireo fanavaozana ireo koa ny biby fiompy. Ireo dia hita ao anaty boaty fisakafoanana ary manome a vokarin'ny bonus amin'ny mponina manana izany. Ny biby dia azo entina any amin'ny tany efitra. Toy ny junk, fitaovam-piadiana, ary fitafiana, manana ambaratonga telo koa izy ireo.
Ary momba ireo trangan-javatra ireo, ao anatin'io fiadananan'ny fialofana io dia hijaly isika fanafihana mutarat, mpandroba, voalavo voalavo, marin-dra, ghouls ary mutasorpius. Tsy azontsika atao koa ny manadino ny afo, satria mety hiparitaka izy io ary atahorana hampidi-doza ny toeram-piarovana niokleary, koa miambena ary ampitaovy fitaovam-piadiana sy fitafiana tsara indrindra ny mponina mba hahafahana miatrika loza isan-karazany.
Ny iraka sy ny rafitra ady
Ireo iraka ao amin'ny Fallout Shelter mamela antsika ho eo alohan'ny lalao hafa, satria afaka mifehy an-tanana ireo mponina izay hofidinay hitondra azy ireo ho vondrona. Tsy maintsy mizaha fotodrafitrasa amin'ny iraka isika na rehefa mizaha ny Wasteland ny iray amin'ireo mponina dia mety hisy iraka fanampiny.
Aza adino ny mampitafy tsara ny voafidinao voafantina mba hahafahan'izy ireo manadio ny radioactivity sy manasitrana ara-potoana. ny samy hafa ny haavon'ny iraka ary afaka manome valisoa tsara izy ireo. Raha vantany vao nanomboka ny iray dia tsy maintsy misafidy mponina ianao hisintona azy any amin'ny efitrano tianao hitadiavany azy.
Hahita ny karazana fahavalo rehetra ianao ary toy ny amin'ny Fallout, hanana ny mety ianao mandefa fanafihana mitokona mahafaty rehefa miseho eo amin'ny mponina ny kisary fanamarinana. Raha manindry amin'ny fotoana mety ianao dia afaka manome taha ambony kokoa. Manome teboka hafa an'i Fallout Shelter ireo iraka ireo ary io no iray amin'ireo fanampiana tsara indrindra azontsika tamin'ny taona ho an'ity lalao video ity izay mbola manome ady be hatrany.
Mamporisika anao aho jereo ny horonantsary lohapejy mba hahitana ny zavatra hafa rehetra momba ny Fallout Shelter toy ny zazakely, efitrano fiofanana, efitrano radio, Andriamatoa Handyman, mode d'exploitation na barberhop.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Lalao Android » Ny rehetra momba ny Fallout Shelter, ny lalao video Bethesda izay manavao hatrany hatrany
Pokémon GO dia manambara ny mpitarika ekipa ary manambara vaovao: Pokémon vaovao sy fahaizana mivarotra